Daangaa Beenishaangul Gumuzitti ‘kaleessa qofa Poolisoonni Oromiyaa 10 ajjeefaman’ – Kichuu
[ June 18, 2021 ] OMN: Hiriira Mormii Hawaasa Oromoo Oslo	Videos
[ June 18, 2021 ] Filannoo Sobaa Fi Ibsa WBO	Videos
[ June 18, 2021 ] Ethiopia’s elections are needed. But they face credibility challenges	Africa
[ June 18, 2021 ] EU teases Ethiopia aid plans amid budget support freeze	World
[ June 18, 2021 ] Ethiopia: Victory for the Oromo will come from winning hearts and minds, not terrorising people	Africa
[ June 18, 2021 ] NEWS: “ETHIOPIAN LEADERS TOLD ME THEY’RE GOING TO WIPE OUT, DESTROY TIGRYANS”, CLAIMS EU ENVOY	World
[ June 18, 2021 ] Ethiopia Denies There’s a Famine in Tigray. We Obtained Photos of Starving Children.	Africa
[ June 18, 2021 ] Ethiopia heads to the polls against a backdrop of insecurity	Africa
[ June 18, 2021 ] Once-thriving economy in trouble as Ethiopia’s Abiy cracks down	Africa
[ June 18, 2021 ] Waraanni Tigraay loltoota Mootummaa fi Shaabiyaa kuma 11 ajjeessu fi Fincila	Videos
HomeAfaan OromooNewsDaangaa Beenishaangul Gumuzitti ‘kaleessa qofa Poolisoonni Oromiyaa 10 ajjeefaman’
Daangaa Beenishaangul Gumuzitti ‘kaleessa qofa Poolisoonni Oromiyaa 10 ajjeefaman’
Image copyrightOROMIA POLICE COLLEGE/FACEBOOK
(bbc)—Guyyaa kaleessaa rakkoo daangaa Oromiyaafi Benishaangul Gumuuzitti dhalateen poolisoonni Oromiyaa ajjeefamuu qondaalli Komiishinii Poolisii Oromiyaa BBC’tti himan.
”Kaleessaa mataa isaa gara nama kudhaniiti [kan ajjeefame]. Sana durammoo torba kan ani beekus ni jira. Garuu, walumaa gala lakkoofsi [poolisoota ajjeefamanii] kana caala,” jedhan hogganaan kominikeeshinii Komishinii Poolisii Oromiyaa, Komishinar Soorii Dinqaa.
Qaamonni kana raawwatan ”Daangaa Oromiyaa keessa seenaniiti kan isaan tarkaanfii fudhachaa jiran,” jedhaniiru.
”Hidhattoonni kaleessa humna keenya 30 hin caalle irratti tarkaanfii fudhatan 250 hanga 300 ta’a” kan jedhan komishinar Sooriin, baay’ee rakkoo guddaa akka ta’e himu.
Hoggantoonni godina Kamashii afur hidhattootaan ajjeefaman
Wallagga Bahaatti Poolisiin Federaalaa tokko ajjeefame
”Bakka baqannee jirrutti gadda nama saddeetii taa’aa jirra”
Akkuma kanaan dura qondaaltonni jedhaa turan, komishinar Sooriinis qaama hidhatedha jedhu.
”Humni kuni kan Benishaangul jennee ilaaluun hin danda’amu. Meeshaa gurguddaatiini ijoolleetti dhukaasaa kan turani.”
Humni meeshaa gurguddaa hidhatee daangaa qaxxaamuree poolisii Oromiyaafi uummata haleelaa jiru kun qaama ”ta’ee jedhee qindeessee abbummaadhaan opireeshinii gaggeessutu jira” jedhu.
“Isaan alatti deeggarsi ni taasifamaaf jennee shakkina, irratti hojjataas jirra” jedhu.
”Tarii meeshaa wal madaaluu ta’uu dhiisuu danda’a malee Poolisiin Oromiyaa hir’ina meeshaa hin qabu” jedhu qondaalli poolisii Oromiyaa kuni.
Haa ta’u malee, ”Saasiggarraa ka’e hanga Haroo Limmuutti” rakkoon wanta turef humna poolisiin to’achuun rakkoo akka ta’e dubbatu.
Gama mootummaatin, yeroo ammaa ”Ummanni daangaa isaa akka eeggatu gochaa jirra,” jedhu qondaalli Poolisii kuni.
“Mootummaan naannolee lamaanii mariirra jiru, humni raayyaa ittisa biyyaafi poolisiin Federaalaa bobba’ee jira” jedhu.
Kamashiifi aanaalee Oromiyaa ollaarraa namoonni 50,000 buqqa’an
Kanaan dura hoggantoonni naannolee lamaanii rakkoo kana furuuf marii’atanii waligaluun isaanii ni yaadatama. Haa ta’u malee, ajjeechaan itti fufeera.
Torban darbellee maatii nama tokko saddeet dabalatee namoonni 40’tti siqan magaalaa Yaasootti ajjeefamuu qondaaltonni himani ture.
Erga Fulbaana darbe qondaaltonni Kaamashii afur daandiirratti ajjefamani as lammiileen hedduu yeroo ajjeefaman kuma 100,000tti kan siqan immoo qe’ee irraa buqqa’aaniiru.
Gama kaaniin, ogeeyyiin fayyaa Hospitaalaa Rifaraala Naqamtee ajjeechaa itti fufee raawwatu mormuun guyyaa har’aa ganama hiriira bahaniiru.
Hospitaalicha irraa Dr Daamxoo Gaarradoo akka nutti himanitti, gaafa Wiixataa kora bittinneessaa lamaafi jiraataa lama akkasumas guyyaa kaleessaa reeffi kora bittineessaa jaha” hospitaala Naqamtee dhufuu isaanii himaniiru.
Ajjeechaa itti fufeen ”hawaasa tajaajiluu hin dandeenye, hojiin keenya reeffuma lakkaa’uu ta’e” kan jedhan Dr. Daamxoon, mootummaan xiyyeeffannaa akka itti kennu hiriira bahuu isaanii BBC’tti himaniiru.
Dararaa “Jail Ogaden” Keessatti Raawwatame Lammiiwwan Itiyoophiyaa Biyya Alaa Jiran Harka Keessaa Qabu Jedhame
Takkaa dhumnee lafarraa badna, takkaa mootummaa kanatu bada malee…..
OMN: Hiriira Mormii Hawaasa Oromoo Oslo
Filannoo Sobaa Fi Ibsa WBO
Ethiopia: Victory for the Oromo will come from winning hearts and minds, not terrorising people
NEWS: “ETHIOPIAN LEADERS TOLD ME THEY’RE GOING TO WIPE OUT, DESTROY TIGRYANS”, CLAIMS EU ENVOY
Ethiopia Denies There’s a Famine in Tigray. We Obtained Photos of Starving Children.
Once-thriving economy in trouble as Ethiopia’s Abiy cracks down
Waraanni Tigraay loltoota Mootummaa fi Shaabiyaa kuma 11 ajjeessu fi Fincila
‘Filannoo’ Sirna Fashistii Utubuuf Gaggeeffamu Irraa Qooda Fudhachuun, Yakka Ofii fi Saba Ofii Irratti Dalaguu Dha!
Bilisummaan xumurama! Kan hidhamte haqaaf, haqni hidhaa keessaa oma si baasa!
Nuti pitojeektii jabaa of harkaa qabna: Bilisummaa Oromoo.